News | टाेटनहम
News | Tag: टाेटनहम
ह्यारी केनबारे यसो भन्छन् प्रशिक्षक मोउरिन्हो
एजेन्सी । टोटनहमका फरवार्ड ह्यारी केन अन्य क्लबमा अनुबन्ध हुने खबर लगातार बाहिर आइरहेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनी रियल मड्रिड वा पिएसजीमा अनुबन्ध हुने खबर आएको थियो । टोटनहम ह्यारी केन खुसी नभएको र उनले क्लब छोड्ने मनस्थिति बनाएको खबर बाहिर आएको थियो ।
प्रशिक्षक जोसे मोउरिन्हो दबाबमा !
एजेन्सी । यस सिजन खासै गतिलो खेल प्रदर्शन गर्न नसकेको टोटनहमले प्रिमियर लिगमा लगातार तीन खेलमा पराजय भोगेको छ । गएराति चेल्सीसँग पराजित भएको टोटनहम यसअघि लिभरपुल र ब्राइटनसँग पराजित भएको थियो ।
टोटनहमले यस सिजन उपाधि जित्ला त !
एजेन्सी । यस सिजन पहिलो उपाधि नजिक टोटनहम पुगेको छ । सन् २००८ मा काराबाओ कप जितेको टोटनहमले त्यसपछि एउटा पनि उपाधि जित्न सकेको छैन । यस सिजन भने उपाधि जित्ने संकेत टोटनहमले देखाएको छ ।
आज राति प्रिमियर लिगमा विशेष तीन खेल हुँदै
एजेन्सी । प्रिमियर लिगमा आज राति तीन विशेष खेलहरु हुँदैछन् । पहिलो खेलमा साउथह्याम्टनले सेफिल्ड युनाइटेडसँग आमने सामने गर्दैछ । त्यस्तै दोस्रो खेलमा टोटनहमले क्रिस्टल प्यालेससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
हाललाई टोटनहम प्रिमियर लिग दाबेदार टिमः पेप ग्वार्डीवाला
एजेन्सी । म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डीवालाले टोटनहम प्रिमियर लिग उपाधिका लागि बलियो प्रतिस्र्धी रहेको बताएका छन् । उनले टेबलमा देखिएको अंक तालिकाले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको बताएका छन् ।
प्रिमियर लिगः म्यानचेस्टर सिटीलाई पराजित गर्ने दाउमा टोटनहम
एजेन्सी । प्रिमियर लिगमा यस सिजन उत्कृष्ट लयमा रहेको टोटनहमले आज राति म्यानचेस्टर सिटीसँग आमनेसामने गर्दैछ । प्रशिक्षक जोसे मोउरिन्होले जिम्मेवारी सम्हालेपछि टोटनहमले सुधारिएको खेल प्रदर्शन गरेको छ ।
मोउरिन्होले टोटनहमलाई उपाधि जिताउन सक्लान् त ?
एजेन्सी । टोटनहमले यस सिजन उपाधि जित्नेमा केही फुटबल समिक्षकहरु आशावादी रहेका छन् । प्रशिक्षक जोसे मोउरिन्होको इतिहासले पनि यस कुराको पुष्टि गरेको छ ।
बेलको आगमनले उपाधि जित्ने सपना बुनेको टोटनहम !
एजेन्सी । यस सिजन टोटनहमले लोनमा ग्यारेथ बेललाई अनुबन्ध गर्न सफल भइसकेको छ । स्टार खेलाडीहरु रहेको टोटनहमले यस सिजन उपाधि जित्ने सम्भावना पनि बलियो रहेको समिक्षकहरुले बताएका छन् ।